Muta ka esi ahia ahia dika Pro | Full Eprel 2021 Ntuziaka
Muta ka esi ahia ahia na 2021 - Nduzi ndi mbido!
Na-achọ ịmụ otu esi azụ ahịa mbak? Ọ bụrụ otu a, ọ bụghị ihe ọhụụ inwe mmetụta gabigara ókè banyere ahịa ahịa. Maka ndị na-amaghị, ọtụtụ ozi naanị ezuola iji mee ka onye ahịa ọhụrụ ahụ pụọ.
N'ikwu nke a, ozugbo ị mụtara ụzọ ins na out of share trading na-arụ ọrụ n'ezie, ọ gaghị adị anya tupu ị mata na uru ya ruru maka mbọ ahụ. N'aka ozo - iji ozi ziri ezi, itinye ego na mbak ekwesighi inwe mgbagwoju anya ma oli.
Na ntuziaka onye mbido nke a, anyị na-akọwa ihe niile enwere ịmara ka ị wee mụta etu esi azụ ahịa mbak n'oge kachasị ọsọ!
Gịnị bụ akụ?
Ahịa bụ nchebe na-anọchi anya akụkụ nke ụlọ ọrụ. A na-azụta ha n'ụdị mbak. Mgbe ụlọ ọrụ siri ike n'ihu ọha, a na-ewepụta ụlọ ọrụ maka ịzụta. Onye ọ bụla nwere ike ịzụta mbak ndị a, si otú a nwee oke na ụlọ ọrụ.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịpụta ọha maka ọtụtụ ihe. O nwere ike ịbụ mkpa ọ dị ịkpata ego ma ọ bụ iji nye ndị nwere oke ha uru ma ọ bụ ọbụna dị ka atụmatụ ịpụ na njedebe.
Gịnị bụ Ahịa Ahịa?
Na nkọwa ya, itinye ego pụtara itinye ego na akụ, atụmatụ ego, ma ọ bụ atụmatụ na atụmanya nke ị nweta nloghachi n'ọdịnihu.
Site na nke a, kesaa 'itinye ego' na ịkekọrịta 'azụmaahịa' dị ezigbo iche.
mgbe ị na- itinye ego na ngwaahịa, naanị ị na-achọ ịzụta mbak nke ụlọ ọrụ nwere olile anya ijigide ha ruo ogologo oge. N'ime oge a, ị ga-atụ anya ịnakọta ụgwọ, ma ọ bụrụ na ihe niile aga nke ọma, ị ga-ere mbak na uru. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ị nweta ego site na itinye ego n'ụzọ dị otu a, ezigbo nzọ gị bụ iji azụmaahịa ọdịnala.
N'aka nke ọzọ, kee trading bu nzụta na ire ere nke otu ulo oru. Emere nke a na obere oge. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na obi siri gị ike na mbak Facebook ga-aba uru.
Ma ọ bụ na ọorụ na jargon, ị na-eche “bullish” banyere Facebook. Kpebiri ịzụta ego 1,000 nke ego Facebook ma ree ha awa ole na ole ma ọ bụ ụbọchị ole na ole ka e mesịrị iji nweta uru nke 2%.
Na ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na i chere na mbak ga-adalata ma ọ bụ yie "bearish," mgbe ahụ ị kpebiri ire obere ebuka. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa nke azụmaahịa ahịa, na-enyere gị aka irite uru ma ọ bụrụ na ị chere na uru ụlọ ọrụ ga-agbada.
Muta ahia ahia - Olee otu o si aru oru?
Twozọ abụọ ị ga-esi nweta ego site na ịzụ ahịa ahịa bụ site na:
Ogologo ahia site na ire otu uzo maka onu ahia kariri nke izuru ya
Obere ahia site na ịzụta oke maka ego dị ala karịa nke ị rere ha
Iji mụta ịzụ ahịa, ị kwesịrị ibu ụzọ ghọta nke ọma ụzọ abụọ a.
Ogologo ahia nke Ahịa
Na ụdị ya kachasị mfe, ogologo ahia nke òkè pụtara na ị na-azụta nha anya na-eche ịrị elu na ọnụahịa. Ọ dị iche na itinye ego na ngwaahịa, ebe ị na-ele anya ịre mbak maka ọnụahịa dị elu.
Nke a bụ otú o si arụ ọrụ.
Na-eche bullish na XYZ mbak, yabụ na ị ga-etinye iwu "ịzụta" na onye na-ere ahịa gị.
Na-azụta mbak 1,000 nke XYZ na $ 10, na-efu $ 10,000
Fewbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, a na-akwụ ụgwọ nke XYZ na $ 10.50
Mgbe ahụ ị ga-etinye iwu "ree" ya na onye na-ere ahịa wee ree $ 10,500
Uru net gị bụ $ 500 mwepu ọrụ.
Mgbe ị gara ogologo oge, uru gị nwere ike ịrị elu na-akaghị aka, yabụ na tiori, usoro gị nwere ike ịrịgo uru ọ bụla. Agbanyeghị, ndị ahịa ụbọchị na-ahọrọ ịpụ n'ọnọdụ ọnọdụ ha n'ihe gbasara nkeji ma ọ bụ oge awa - n'echiche nke irite obere uru.
N'akụkụ tụgharịa, ọ bụrụ na mbak adaa na olu, ị ga-echefu nfu.
Dị ka ndị dị otú a, ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ iji mee ka ihe egwu na uru baa ụba n'okpuru njikwa, na-achọkarị uru site na ọtụtụ obere mkpali iji zere ọdịda dị oke ọnụ.
Short Trading na Ahịa
Shortga na nkenke na-abụkarị ihe mgbagwoju anya nye ọtụtụ ndị ahịa dịka echiche a bụ na ị ga-ebu ụzọ zụta mbak iji ree ha. Ndị ahịa dị mkpirikpi na-achọpụta uru ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịzụta oke na ọnụ ala karịa ka ha rere. Na ahịa ego, ị nwere ike ree ma zụta kwa.
Lelee ihe atụ a iji mụta ịzụ ahịa site na 'ịga obere'.
Y’oburu n’inwe obi uto gbasara mbak XYZ, itinye “ire” ya na onye ahia gi.
Ọ bụrụ na uru ahụ bara uru na $ 10 wee ree 1,000, ị 'anata' $ 10,000.
Agbanyeghị, ọ bụghị ego gị. Kama, akaụntụ gị ga-egosi ugbu a na ị nwere -1,000 mbak. Ruo mgbe ị ga-azụghachi otu mbak 1,000 a, ị gaghị ama ma ị nwere uru ma ọ bụ ọnwụ na ahia a.
Ọ bụrụ na uru oke gbadara $ 9.50, ị na-etinye iwu "ịzụta" na onye na-ere ahịa gị.
Ga-akwụ $ 9,500 maka ọnụahịa ndị ahụ 1,000. Nke a na - ewetara gị uru nke $ 500 mwepu kọmịs.
Na mkpokọta, ka ị daa na ahịa azụmaahịa, onye na-ere ahịa gị ga-ebinye ndị nwe ya ego. Ọ bụrụ na onye na-ere ahia enweghị ike ịchọta ọnụ ọgụgụ achọrọ nke mbak na nnọchite gị, mgbe ahụ ị gaghị enwe ike ịga mkpụmkpụ.
Maka ebumnuche ndị a, ndị na-azụ ahịa ọdịnala anaghị ekwe ka obere azụmaahịa dị. Ọ bụ ya mere CFD ji ekekọrịta nyiwe ahia na-ewu ewu na ndị ahịa ụbọchị ka ha na-enye mgbanwe iji gaa mkpụmkpụ na bọtịnụ nke bọtịnụ.
Kedu Ebuka ị nwere ike Tradezụ ahịa?
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa n'ịntanetị, saịtị ahịa kachasị mma taa na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku mbak. Nke a na - enyere gị aka ịmepụta pọtụfoliyo dị iche iche nke ngwaahịa CFDs.
N'ebe a, anyị nwere ndepụta nke ngwaahịa mgbanwe kachasị ewu ewu nke ndị ahịa na-achọ ịchụ.
Dịka otu n'ime ahịa azụmaahịa kachasị azụ ahịa n'ụwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-ere ahịa n'ịntanetị ga-enye gị ohere a na-ejedebe na NYSE. Ga - ahụ nnukwu ụlọ ọrụ na - acha anụnụ anụnụ na - azụ ahịa na ya, gụnyere Disney, Ford Motors, JP Morgan, na ndị ọzọ.
NASDAQ bu ụzọ kpuchie ndị isi ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ụwa dịka Apple, Facebook, Netflix, Microsoft na ndị ọzọ.
LSE na-akwado ụlọ ọrụ niile ama ama na UK. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inweta ọhụụ na akụnụba UK, LSE nwere ụdị British American Tobacco, Barclays, HSBC, BP, na ndị ọzọ. FTSE 100 bụ nhọrọ ọzọ a ma ama maka ahịa UK, ebe nke a bụ ndepụta nke na-ekpuchi ụlọ ọrụ 100 kasị ukwuu edepụtara na LSE.
TSE na enye gi ohere banyere onodu aku na uba Eshia - ya na ndi nnukwu egwuregwu dika Mitsubishi, Toyota, NIPPON na SoftBank.
Fzụ ahịa CFD
Tupu anyị aga n'ihu, ọ dị mkpa ka anyị tụlee okwu bụ isi nke ị ga-achọ ịghọta iji mụta ịzụ ahịa nke ọma - CFDs.
Nkwekọrịta maka Ọdịiche (CFD) bụ ngwa ahịa azụmaahịa na-enye ndị ahịa ohere ịkọ nkọ banyere ịrị elu ma ọ bụ ịda ahịa nke ebuka. Mgbe ị na-ere ahịa site na CFDs, ị nweghị ngwaahịa ị na-ere. N'ụzọ dị iche, CFDs na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọdịnihu nke ngwaahịa ahụ.
N’ebe dị ala, ịgaghị enwe ikike ikike onye nwe ngwaahịa, nke pụtara na ị gaghị enweta nkata. Kama nke ahụ, ị ​​ga-enweta ego site na uru isi obodo ị nwetara site n'ire ma ọ bụ zụta ngwaahịa maka ọnụahịa dị elu ma ọ bụ dị ala karịa ka ị kwụrụ.
Ekekọrịta ahia na ntinye
Leverage bụ usoro ahia nke ndị na-achụ ego nwere ike iji mee ka mgbasa ozi ahịa ha dịkwuo elu site na ịkwụ ụgwọ na-erughị uru zuru oke nke ngwaahịa. N'aka ozo, akuku nke uzo ahia ahia gi na enyere gi aka.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ itinye $ 10,000 na ngwaahịa, mana ị nwere $ 5,000 na akaụntụ azụmaahịa gị. Site na iji leverage, ị nwere ike ịzụta na oke na 2: 1, na-enye gị $ 20,000 itinye ego. Agbanyeghị, ị ga - eme nkwụnye ego mbụ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ na onye na - ere ahia gị iji zụta n’akụkụ.
Ka anyị leba anya na ụdị azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma nwere ike ịdị.
Na-aga bullish na ebuka XYZ, yabụ ị kpebiri ịga 'ogologo'
Ugbu a òkè uru nke XYZ bụ £ 30.50
Only nwere naanị £ 100 na akaụntụ azụmaahịa gị, mana ịchọrọ ịzụ ahịa na ndị ọzọ.
Apple leverage apụl nke 5: 1, nke pụtara na ị nwere ike ịzụta ebuka XYZ ruo uru £ 500
Fewbọchị ole na ole ka e mesịrị, XYZ na-abawanye na £ 35.50 (uru nke 16.3%)
Place na-edebe ire ere iji nweta uru gị
N'okwu a, ị gaara enwebu 16.3% uru na osisi £ 100 gị - nke na-arụ ọrụ na .16.30 5. Ma, ebe ọ bụ na i nyere 1: 16.3, uru gị bara uru ga-abụ .5 81.5 x XNUMX = £ XNUMX.
Ọ bụrụ na ọnụahịa ngwaahịa agbatịghị na uru, ị ga-efu ego. Dika ihe itinye ego gi n’eme ka abawanye, ihe ndia na abawanye.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na n'oge mbụ ị na-azụ ahịa, ị nwere ike ọ gaghị akpata ego. Kama nke ahụ, ị ​​nwedịrị ike ịla n'iyi. Dị ka ndị dị otú a, ọ dị mkpa ka ị ghọta ihe ndị pụtara mgbe ị mụtara ịzụkọrịta òkè site na itinye ego.
Muta ahia ahia - iwu ahia
Azụmaahịa ọ bụla i debere ga-achọ iwu abụọ, otu ga-emeghe ma nke ọzọ mechie.
Mgbe ogologo ahia, ị na-emeghe na a Buy iji na-emechi na a na-ere.
Na obere ahia, ị na-amalite na a na-ere iji na-emechi na a Buy iji.
Ozugbo ị matara ụzọ ị ga-aga maka ụbọchị ahụ, enwere ụdị usoro ndị ọzọ ị ga-etinye.
Ahịa / Iwu Iwu
Ọ bụrụ n'ịhọrọ usoro ahịa, mgbe ahụ nke a pụtara na ị dị njikere ịnabata ọnụahịa dịnụ dị na ngwaahịa a dị. Ozugbo enyere iwu, usoro azụmaahịa ga-emezu ahịa ahụ.
N'aka nke ọzọ, usoro ịgba ga-achọ ka ị kọwaa kpọmkwem ọnụahịa nke onye na-ere ahia kwesịrị imezu azụmaahịa gị. Mgbe ị na-ahọrọ nke a, enwere ohere ọ bụla na ọnụahịa a agaghị agakọ. Mana, ọ ga - enye gị ohere ịbanye ma ọ bụ hapụ ahịa na ọnụahịa ị kpebiri.
Usoro nkwụsị-nkwụsị ga-enye gị ohere ịhapụ ahịa ngwaahịa gị na ọnụahịa akọwapụtara - mgbe ị nọ na-acha uhie uhie.
Mgbe ị na-aga ogologo oge, iwu ịre ahịa na-ebute ahịa ma ọ bụrụ na ọnụahịa dara n'okpuru ọkwa ụfọdụ. Nke a na - arụ ọrụ n’echiche na ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ dabara na ọnụahịa nkwụsị a, ọ ga - ebelata naanị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ ọnọdụ gị mgbe ị nọrọ 3% ala, iwu nkwụsị ga-eme nke a n'aha gị.
Ya mere, a na-akwụ ụgwọ ọnwụ site n'ire na ọnụahịa ire ere. N'aka nke ọzọ, iwu ịzụta na-echebe ọnọdụ dị mkpụmkpụ ma ọ ga - ebute ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ gbagoo karịa ọkwa ahụ.
Ọ bara uru ọzọ ịtụle ọnọdụ ahụ na iwu nkwụsị-adabaghị. N'ọnọdụ ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ 'ndokwa' ịkwụsị nkwụfu. Have ga-akwụ ụgwọ nke ka elu mgbasa, ma na ore ahia ga-ekwe nkwa na nkwụsị-ọnwụ price ga-triggered n'agbanyeghị nke ahịa ọnọdụ.
Usoro ntinye uru bụ ezigbo ntụgharị nke usoro nkwụsị-nkwụsị. Na ọnọdụ dị mma, ị nwere ike inwe olile anya maka ọnụahịa ahụ ka ọ na-ebili ma ọ bụ wedata na ihu ọma gị. Mana enwere ohere mgbe niile na ọ nwere ike ịkwatu ebe ọ bụla. N'iburu nke ahụ n'uche, ọ ga - aka mma ijide uru gị mgbe ọnụahịa zutere uru-elekwasị anya.
Ozugbo ọnụahịa ruru ihe achọrọ, azụmahịa gị ga-emechi ozugbo.
Ekekọrịta Fegwọ ahia
Mgbe ị na-amụta otu esi azụ ahịa, ọ dị mfe ileghara ụgwọ na ọrụ ndị ị ga-akwụ ụgwọ maka onye ị họọrọ anya. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara ego ole ị na-akwụ n'ihi na ọ nwere ike iri ihe nkwụghachi ego gị.
N'okpuru ebe anyị depụtara ụfọdụ ụgwọ ndị kachasị mkpa ịkwesịrị ile anya.
Okwu a bụ 'ego na-abụghị azụmaahịa' metụtara ụgwọ ị kwụrụ onye na-ere ahịa na anaghị metụtara ịzụrụ na ire ere. Ndị a sitere na ụgwọ nkwụnye ego, ego nkwụghachi, na ụgwọ akaụntụ.
N'ime nke a, ị nwere ike ịchọrọ ịdekọ ụgwọ ego adịghị arụ ọrụ, nke onye na-ere ahịa na-ebo ebubo ya ma ọ bụrụ na akaụntụ azụmaahịa gị na-anọgide na-adịghị arụ ọrụ maka ọnwa ole na ole.
Ekekọrịta isslọ Ọrụ Ahịa
Otutu uzo ahia ahia gha acho gi ego nke ahia gi. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ọrụ nke 0.6% ma zụta ebuka maka £ 1,000, a ga-ebo gị £ 6 dịka ego.
Cheta na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ maka ire na ịzụrụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ịre otu ngwaahịa ahụ na ihe atụ dị n'elu maka uru nke £ 1,500, ọrụ ị kwụrụ ga-abụ £ 9.
N'ahịa ahịa, mgbasa bụ ọdịiche dị n'etiti nzụta na ire ere e hotara maka ngwaahịa. Ọ bụrụ na ọnụahịa kachasị rịọ (zụrụ) maka oke nke ngwaahịa XYZ bụ $ 10, na ọnụ ahịa kachasị elu (ere) bụ $ 9.50, mgbasa nke XYZ bụ $ 0.5.
Nke a pụtara na ọdịiche dị n’etiti ọnụahịa abụọ bụ 5%. Ikwesiri irite uru nke opekata mpe 5% iji gbajie n’ahia a.
Iji maa atụ nke a - ka anyị kwuo na ị zụtara mbak nke XYZ na $ 10 kwa ngwaahịa
Have gbanwere obi gị na mberede, n'ihi ya ị kpebiri ire ebuka ozugbo.
Agbanyeghị, ịnweghị ike irere ebuka na ọnụahịa ị zụtara ha, kama na $ 9.50.
Nke a pụtara na ị bụ n'ezie na a 5% ọnwụ. Would ga-agbaji naanị ọbụlagodi na ị nwere ike ire $ 10 n'onwe ya.
Nke a bụ ihe kpatara ị ga-eji họrọ maka azụmaahịa azụmaahịa na-enye mgbasa dị ntakịrị. Ma ọ bụ ọzọ, uru ị ga-enweta ga-ekpebisi ike site na ọdịiche dị na ọnụego.
Muta ahia ahia taa
O siri ike ịmụta ịzụ ahịa na ntanetị, ma ọ na-ewe oge iji nweta uru na-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ n’ị tụrụ anya irite uru site n’ihe ị ga - enweta, ị ga - enwe mmechuihu. Kama nke ahụ, ndị ọhụụ ọhụrụ (na oge) ahịa ga-enweta mfu.
Maka ndị na-abanye dị ka onye mbido zuru oke ahia n'ịntanetị nyiwe, nke a bụ usoro a-nzọụkwụ ị nwere ike iso.
1. Choo Ahia ahia ahia
Iji zụọ ahịa na ntanetị, ị ga-ebu ụzọ nweta akaụntụ azụmaahịa. Nchọgharị ịntanetị ngwa ngwa ga-egosipụta ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na ndị nnọchi anya chọrọ azụmahịa gị. Agbanyeghị, ọtụtụ nhọrọ a nwekwara ike ịme mgbagwoju anya.
N'otu nlele, ha niile nwere ike iyi ka ha na-enye atụmatụ na ngwaọrụ ndị yiri ya, nke mere na ị ga-eji rụọ ọrụ ụlọ gị tupu ịhọrọ saịtị azụmaahịa gị. Gaa nyocha na ntanetị na ihe ndị dị ka ịnweta ahịa ahịa mba ụwa na usoro ego.
Iji mee ka ihe dịtụ mfe, anyị etinyela ndepụta nke ụfọdụ saịtị azụmaahịa kachasị mma na njedebe nke ndu ahụ.
2. Mepee Akaụntụ
Ozugbo ị họpụtara saịtị kwesịrị ekwesị iji zụọ ahịa ihe ị chọrọ, ịkwesịrị imeghe akaụntụ. Ikwesiri inye nkọwa nkeonwe gị ma họrọ aha njirimara na paswọọdụ.
Dị ka ụlọ ọrụ ego ọ bụla, a ga-achọkwa ka ị nyochaa njirimara gị site na ibudata otu ID nke gọọmentị nyere gị.
3. Tinye Ego na Akaụntụ Gị
Ekekọrịta saịtị ahia chọrọ ka ị nwee ego na akaụntụ ahụ kama ịnyefe ego maka azụmahịa ọ bụla. Ndị na-ere ahịa ga-enwerịrị ohere ịnweta ego gị ozugbo iji mee azụmahịa dịka ọnụahịa ngwaahịa na-agbanwe na ntọala nke abụọ.
Ọ bụ ezie na nhọrọ ịkwụ ụgwọ maka saịtị azụmaahịa ọ bụla ga-adị iche, nke a nwere ike ịgụnye debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ, waya / nnyefe akụ, ma ọ bụ e-wallets dị ka Paypal, Skrill, na Neteller.
4. Kpebie ego ole ị chọrọ itinye ego
Maka ndị mbido, ajụjụ kachasị mkpa bụ ego ole ị kwesịrị ịmalite iji tinye ma ọ bụ ịzụ ahịa. Enweghi oke oke etu ị ga - esi tinye ego - mana, ọ nwere ike bido ịmalite obere.
Na na kwuru, ị ga-na ọ dịghị ihe ọzọ mkpa iji hụ na ị na-enwe ike izute ore kacha nta ahia size.
5. Debe Iwu Gị
Ozugbo i debere iwu gị, ọ nweghị ntụgharị ọ bụla. Tụlee isi ihe ndị anyị tụlere n’elu wee mee mkpebi doro anya tupu gị adaba
Na nchịkọta, ị ga-eso usoro ndị a.
Họrọ ngwaahịa ịchọrọ ịzụta ma ọ bụ ree
Kpebisie ike nha ahia gị ma tinye ego ahụ
Họrọ site na oke ma ọ bụ usoro ahịa
Ọ bụrụ na ị na-agbazinye ego, họrọ otutu gị
Tinye ọnọdụ nkwụsị iji mebie mfu gị
Tinye ọnọdụ na-erite uru iji kpochie-uru gị.
Ozugbo i debere iwu gị, usoro ịzụ ahịa azụmaahịa kwesịrị ime ya n'ime sekọnd.
6. Mechie Ọnọdụ Gị
Ọ bụrụ n'itinyela nkwụsị nkwụsị ma ọ bụ iji nweta uru, mgbe ahụ mmechi nke ọnọdụ ga-ewere ọnọdụ n'ụzọ kwekọrọ na ya. Ma ọ bụghị ya, ị ga-achọ iji aka gị mechie azụmahịa gị. Will ga-enyerịrị ire ma ọ bụ zụta iji wepu ahia gị. Mgbe emechara usoro a, ị ga-enweta uru ọ bụla akwụpụtara na njikwa akaụntụ azụmaahịa gị.
Họrọ Sharetọ ahia ahia
Otu ihe ịma aka kasịnụ maka ndị mbido bụ ịchọta ikpo okwu azụmaahịa a pụrụ ịdabere na ya inyefe nhọrọ nhọrọ azụmaahịa ha. Anyị na-akwado ka ị tụlee ihe ndị na-esonụ tupu ị kpebie ebe saịtị azụmaahịa ga-esonye.
1. Saịtị ahụ ọ na-achịkwa?
Tupu ị gafee atụmatụ na nhazi ego, ihe mbụ ị ga-ahụ bụ na a na-achịkwa ikpo okwu azụmaahịa. Achọrọ ndị na-ere ahịa niile ka ha jide ikike na ngalaba na-achịkwa iwu dị ka FCA na ASIC. Chọghị isonyere saịtị onye na-ere ahịa nke anaghị achịkwa, n'agbanyeghị etu atụmatụ ha si baa uru. Ma ọ bụghị ya, ị na-etinye ego gị n'ihe egwu.
2. Kedu usoro ịkwụ ụgwọ dị?
Needkwesịrị iji hụ na saịtị ahụ na-enye gị ohere ịnyefe ego site na usoro kachasị amasị gị. Ọ ga-adị mma ịnweta ihe karịrị otu nhọrọ ga-ekwe omume.
Ọtụtụ ndị na-achụ ego na-achọ ụzọ nkwụnye ego nke kaadị akụ n'ihi na ọ ga-enye ha ohere itinye ma wepụ ego ozugbo. Agbanyeghị, mgbe ị na-eme nke a, ị ga-atụlekwa oke nke mbufe ọ bụla.
3. isslọrụ na mgbasa
Dị ka anyị kwurula, ịkwesịrị ịmụ banyere mgbasa na ọrụ ndị ị ga-akwụ na saịtị azụmaahịa ahụ. Dị ka o kwesịrị, ị na-aga maka nnukwu ọrụ na ịgbasa agbasa.
Mee nza nke nyocha na ebe ahia gi choro ma tulee oru ya tupu i debanye aha.
4. Igba egbe leverage
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịhọrọ ịghara iji leverage mgbe mbụ ịmalitere na oghere azụmaahịa, n'ọdịnihu, ịnwere ike ịchọ nhọrọ a. Dịka, hụ na onye na-ere ahịa gị na-akwado nke a site na mmalite.
Dabere na ọnọdụ gị, a ga-enwe njedebe maka ọnụọgụ ego nke onye na-ere ahịa nwere ike ịnye. Iji maa atụ, UK na EU nwere leverage metụtara na 5: 1 na mbak. N'aka nke ọzọ, mba ụfọdụ enweghị oke oke ma ọlị.
5. Olee akụrụngwa ha na-enye?
A na-agbakọ ihe ọ bụla na-aga na ahịa ahịa ahịa. Kwesịrị iji ngwa nyocha niile kwesịrị ị nweta mkpebi ọ bụla. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nyocha nke teknụzụ, ọtụtụ saịtị azụmaahịa na-enyekwa ngwaọrụ ọgụgụ eserese dị elu.
Ọ dịkwa oke mkpa na ịnweta ụzọ dị mkpa yana Atụmatụ ahia. Họrọ a ahia ahia saịtị nwere ike inye ma, yana mmelite oge.
6. Kedu ahịa Tradable dị?
Ọ bụrụ na ị họrọla ngwaahịa ịchọrọ itinye ego na ya, ị ga-ahụ saịtị nke na-enye mgbanwe mgbanwe akọwapụtara na ya. Ọzọkwa, ọ bụghị usoro ịzụ ahịa ọ bụla na-enye gị ohere ịbanye na ahịa mba ụwa - yabụ kpachara anya nyochaa nke a tupu ịbanye.
7. Oge iwepụ
Ọtụtụ ndị ahịa na-eleghara iwu iwepụ nke saịtị azụmaahịa anya. Sitesfọdụ saịtị na-ewe oge dị ukwuu iji aka hazie iwepụ, ebe ndị ọzọ na-eme nke a na akpaghị aka. Ọkacha mma, ịchọrọ ịrụ ọrụ na saịtị nwere ike ịhazi ịkwụ ụgwọ ọ bụla karịa 48 awa mgbe ịchọrọ ịrịọ.
8. Nkwado Ndị Ahịa
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ịchọrọ onye na-ere ahịa nke na-enye nkwado ndị ahịa. Nke a pụtara na nkwado ma ọ dịkarịa ala ihe ndabere 24/5 - n'ihi na nke a kwekọrọ na oge nke ahịa ego ọdịnala. Taa, saịtị dị njikere inye nkwado site na nkata ndụ ma ọ bụ email, nke na-enye ha ohere ịbanye na ahịa mba ụwa.
Ngwaahịa kachasị mma iji mụta ịzụ ahịa
Dị ka anyị kwurula na mbụ, lee ndepụta anyị nke nyiwe azụmaahịa ise kachasị elu nke na-agbaso njirisi nhọrọ anyị niile. Ha ise dị mma maka ndị mbido ma nwee ụdị àgwà ndị a:
Na-akwado ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ
Enyele ala na-agbasa na isslọrụ
Na-enye ndị ahịa a pụrụ ịtụkwasị obi
Enye ohere ire na leverage
1. eToro - Best Share Trading Broker maka Ndị Mbido
eToro na-achịkwa FCA, ASIC, na CySEC. Usoro mmeghe akaụntụ na eToro bụ ngwa ngwa na enweghị ntụpọ ma na-enye ndị ọrụ ohere ịzụ ahịa mmekọrịta. Saịtị ahụ na-enye ugbu a ihe karịrị 800 ahịa n'ofe ọtụtụ ahịa mba ụwa. Ga-enwe ọtụtụ usoro ịkwụ ụgwọ iji họrọ. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
4. AVATrade - Ego Ntanye 2 x $ 200
AvaTrade bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ntanetị kacha ochie na ntanetị na ohere iji nye nkwado maka ndị na-etinye ego. A na-achịkwa ụlọ ọrụ ahụ na ọkwa atọ-1 na mpaghara atọ-2, na-eme ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa nchekwa na nchekwa dị ala maka ebuka, forex na ngwaahịa ndị ọzọ CFDs. Ọ na-enye ọnụahịa na-agbanwe agbanwe maka mgbasa. Ọ bụ ezie na ị ga-ahụ nyocha ahịa na akara ngosi azụmaahịa, ị nwere ike ịchọtaghị ngwa ọrụ nyocha dị elu dị na saịtị azụmaahịa ndị ọzọ na ndepụta ahụ.
Dika anyi ekpughere na nkuzi anyi banyere ahia ahia, ibu ndi na etinye ego nwere ike iwe oge. Ozi ọma ahụ bụ na ịnwere ike iji usoro dị ike na nke na-agafe agafe, site na ijikọta ngwaahịa ịkwụsị na òkè trading.
N’ụzọ dị oke mkpa, anyị ekpuchila ihe niile dị mkpa ịchọrọ ịma maka ịbanye n’ahịa ahịa ịntanetị. Naanị jide n'aka na saịtị ịzụ ahịa ị họọrọ na-enye ihe niile ị na-achọ ma ghọta ihe ize ndụ ndị dị na ya tupu itinye ego.
Enwere m ike ị nweta uru site n'ịzụ ahịa?
Are na-atụgharị uche na ntụzịaka ọdịnihu nke ebuka mgbe ị na-etinye 'azụmaahịa'. Dika nke a na enyere CFD aka, odighi ikike iketa ndi ozo.
Kedu ihe kpatara m ji chọọ nyocha m mgbe m na-ere ahịa na ntanetị?
A choro ka a na-edebe saiti a na-ekenye ahia ka o rube isi n'iwu AML, nke pụtara na ha ga-enyocha njirimara gị site na NJ nke gọọmentị nyere.
Kedu ego ole kacha nta iji tinye ego na saịtị azụmaahịa?
Ọnụ ego kacha nta dabere na saịtị azụmaahịa akọwapụtara.
Kedu ụgwọ ndị metụtara azụmaahịa azụmaahịa?
Ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ dị iche iche, gụnyere ọrụ, mgbasa, ego, na ego na-abụghị azụmaahịa.
Tradingzụ ahịa ahịa na itinye ego ọ ga-ekwe omume?
All CFD trading saịtị na-enye gị ohere ịzụ ahịa mbak na leverage. Agbanyeghị, ọnọdụ gị yana ikike azụmaahịa gị (ọkachamara ma ọ bụ ndị ahịa azụmaahịa) ga-ekpebi ikike ịgba ụgwọ gị.
Ọ bụrụ na i chere na ọnụ ahịa ngwaahịa ga-agbadata, bido site na ịtụkwasị onye na-ere ahịa gị ahịa, ozugbo ị nwere ọnọdụ bara uru, mechie azụmahịa gị site na ịtụkwasị usoro ịzụta.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ dị iji tinye ma wepụ ego na saịtị azụmaahịa?
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche site na otu saịtị ahịa gaa na nke ọzọ. N’ozuzu, ị nwere ike ịchọta nhọrọ iji kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ akụ, ma ọ bụ e-wallets. .